Ajoblanco waseAlmería | Ukupheka kweKhitshi
UAna noAsu Chamorro | | Cuisine yaseSpain, Ukuqala okubandayo, Amahashe d'oeuvres, I-Tapas kunye ne-skewers
Le recipe ifana nephondo laseAlmeria, sisiseko seamangile kunye negalikhi. Incasa iyamangalisa kwaye iphantsi, ayishiyi umoya wegalikhi! Into ebalulekileyo kuxhomekeke kwitheko 😉 Kwiresiphi yokuqala ubisi lubisi lwenkomo, kodwa songeze ubisi lweamangile, into esinayo ekhaya.
Kwelinye icala, asizicubulanga iiamangile, yiyo loo nto sinokubona ukuba i "Ajoblanco" yethu "yigalikhi etyheli" kodwa ukuba incasa yayo iyinyani, siyakuqinisekisa! Siyayithanda le almond kunye negarlic ekusasazeni ehamba nemifuno okanye isandwich yenkukhu kwisidlo sangokuhlwa, ohhhh yintoni eyonwabisayo !!
umbhali: UAsu noAna Chamorro
Ixesha lokupheka: 5 m
I-200 gr yeeamangile ezixobukile
I-100 gr yesonka kusuku olungaphambi kolumanzi
I-150 ml yeoyile ye-oliva eyongezelelweyo
I-100 ml yobisi (ndisebenzise ubisi lweamangile)
30 ml yeviniga
Kuqala kufuneka sisike isonka kwaye simanzi, ayisiyiyo ukufakwa ngokupheleleyo, kodwa malunga nokwenza ithambe kwaye ifumile.
Asikhange siwaxobule iiamangile, okokuqala ngenxa yokuba zazingenalo ulusu olukrakra kwaye okwesibini kuba ndingakhange ndibone kufanelekile. Kodwa ngokuqinisekileyo unokuzixobula iiamangile, enyanisweni kufanele ukuba uzixobule. Kwakhona, ukuba uyayenza, igalikhi emhlophe iya kuba mhlophe kwaye ingabi bumthubi njengam.
Ukucoca ii-almonds kulula kakhulu, kufuneka siziphawule. Ukwenza oku, bilisa amanzi epanini, ubeke amanzi kwisitya apho iiamangile zinesikhumba. Kuya kufuneka sifake ii-almond okomzuzu omnye ukuba ziiamangile ezintsha kunye nemizuzu emi-1 ukuba ziiamangile ezithengwe kwivenkile enkulu. Ukususa ulusu, kuya kufuneka sipholise iiamangile phantsi kwempompo ukusika ukupheka kwaye sinike ulusu incinjana. Siza kucoca iiamangile zethu!
Kwiglasi ye-blender yongeza igalikhi, isonka esimanzi, ioyile, ubisi, iviniga kunye netyuwa. Ukudibanisa imizuzu embalwa ukubetha ukuba yonke into siyityumze kancinci.
Yongeza iiamangile kwaye utyumle yonke into kwakhona, ngeli xesha kufuneka sibe nobume bokugqibela. Kwialmeria igalikhi emhlophe kuya kufuneka uqaphele ubume beamangile, ke ukuyityumza, kodwa ungayibaxi! Ngethuba lale nkqubo yokugqibela yokutyumza i-almond, ndiyathanda ukongeza ubisi, kuba xa lupholile luza kusibandisa.
Emva kokuchotshozwa, nambitha ityuwa kwaye ukuba kuyimfuneko, lungisa. Kwaye ulungile!
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Abahlobo » Ukuqala okubandayo » UAjoblanco waseAlmería
Iitamatisi ezixutyiweyo kunye nekhukhamba kunye nepepile enongwe
Amakhonkco e-anyanisi othosiweyo